Wasiirka Duulista Soomaaliya Oo Amaro Cusub Ku Soo Rogay Shirkadaha Diyaaradaha Ee Isticmaala Madaarka Muqdisho
(Hadhwanaagnews) Thursday, July 12, 2018 14:05:52
Muqdisho(HWN):-Wasiirka duulista hawada soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Salaad ayaa soo bandhigay amaro uu dul dhigay diyaaradaha ka hawl galaya garoonka muqdisho.
Wasiir Salaad oo maanta kormeer ku tagay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cade ayaa sheegay in diyaaradaha isticmaalaya aroonka looga fadhiyo inay dhamaystiraan adeegyada ay u fidinayaan dadka macaamiisha ah.
Wasiirka Duulista hawada soomaaliya oo ka hadlaya waxyaabaha looga baahan yahay shirkadaha diyaaradaha ayaa waxa uu yidhi “’Laga bilaabo maanta ay tariikhdu tahay 12 07-2018 waxaa la farayaa in shirkadaha diyaaradaha ee ka Howl gala Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqisho looga baahan yahay inay buuxiyaan sharuudaha, loogana baahan yahay inay ka shaqeeyaan badqabka
rakaabka, cidii dhamaystiri waydana aanay ka shaqayn Karin ggaroonka Muqdisho.”
Sidoo kale wasiirka duulista soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadu ay diyaar u tahay iyada oo is kaashanaysa in kor loo soo qaado tababarka shaqaalaha ka hawl gala madaarka Muqdisho.
Dhinaca kale maareye ku xigeenka mniga iyo maamulka ee garoonka Muqdisho Caydaduur Axmed Kaahiye ayaa wasiirka u soo bandhigay tirada diyaaradaha isticmaala garoonka iyo codsiyada kuwo kale oo ay hayaan waxaanu yidhi “Maalintii diyaarahada ka soo dego garoonka diyaaradaha Muqdisho waxaa ay gaadheen in ka badan 50 islamarkaana shaqada Garoonku way sii balaadhatay, haatana waxaa jira codsiyo fara badan kuwaas oo ay shirkado diyaaradeed ku doonayaan inay duulimaadyo ka bilaabaan gudaha dalka.”